Ethula inkulumo yakhe kulomcimbi, uSekeleshansela noMphathi uSolwazi Malegapuru Makgoba uthe amaqiniso, ukucabanga ngokufanele nobuntu jikelele kulele olimini.
Le Indaba beyinengxoxo ebiholwa yiDini YezokuFunda NokuFundisa eKolishi YezoLuntu uSolwazi uNobuhle Hlongwa. Abebebambe iqhaza engxoxweni bebehlanganisa kubalwa iphini likaSekelashansela : KwezokuFunda NokuFundisa uSolwazi Renuka Vithal, uDkt Langa Khumalo umqondisi we-ULPDO nabebemele abezindaba okunguMnu B Zondi (Ilanga), Mnu I Sithole (Isolezwe), Nkz Z Mkhize (Ukhozi Fm), Solwazi O Nxumalo ( umbhali noSolwazi woLimi lwesiZulu).
UVithal uvule ingxoxo ngokucacisa ngempumelelo yeNyuvesi ehambisana nenqubomgomo yayo yolimi.
UDkt Khumalo uthe injongo yalengxoxo bekuwukubheka izindlela zokusabalalisa amatemu esiZulu athuthukiswa yiNyuvesi.
USolwazi Otty Nxumalo (oyisifundiswa solimi esiphezulu) utshele izethameli ngokufunda kwakhe isiZulu ngesiNgisi eNyuvesi waphinda wadlulisa nentokozo anayo ngalezi zinguquko ezenzeka e-UKZN.
USolwazi uVithal uvule ngokusemthethweni ihhovisi lezokuHlelwa nokuThuthukiswa koLimi. Ubalule ukuzinikela kukaDkt Khumalo nethimba lakhe ngokubamba iqhaza elikhulu ekuphumeleleni kweNdaba phakathi kweminye imisebenzi eyenziwa yihhovisi.
USolwazi Laurette Pretorius waseNyuvesi yaseNingizimu Afrika wethule inkulumo ebinesihloko esithi “Language Technology and the web”.
Ms S van Niekerk ukhulume ngokufunda kwakhe isifundo sesiZulu. Ubalule ukufunda isiZulu KwaZulu-Natali nokuthi kulusizo uma ekhuluma nabantu abakhuluma ulimi lwesiZulu okuhlanganisa nokubingelela nje kukodwa kumsize kakhulu.
Ekubungazeni Indaba Yokuthuthukiswa Nokusatshalaliswa Kwamatemu EsiZulu, iHhovisi lengeze ngokuhlela umncintiswano wamagama esiZulu. USolwazi Vithal umemezele onqobe umncintiswano uMnu Lwazi Cele oziwinele umathangeni (laptop).
Indaba yonke beyitolikwa ngesiZulu nesiNgisi uMnu Njabulo Manyoni noMs Winnie Ngongoma (eThekwini Municipality : Language Services).